Otu esi etinye Rocky Linux 8.4 Nzọụkwụ site na nzọụkwụ na nseta ihuenyo - LinuxCapable
October 30, 2021 July 17, 2021 by Jọshụa James
Ihe Akụrụngwa chọrọ
Budata Rocky Linux
Mepụta USB boot
buut na Rocky Linux
Họrọ Asụsụ Mmasị maka nrụnye
Nchịkọta nwụnye – Nhazi
Nhazi nhazi mpaghara
Nhazi nkwado asụsụ
Nhazi nhazi oge na ụbọchị
Nhazi Isi mmalite nwụnye
Nhazi Nhọrọ Software
Nhazi ebe nwụnye
Nhazi netwọkụ na aha nnabata
Nhazi ntọala onye ọrụ
Tọọ nhazi okwuntughe mgbọrọgwụ
Nhazi nrụpụta onye ọrụ
Bido nwụnye Rocky Linux 8.4
Rocky Linux bụ azịza ozugbo maka debacle nke sistemụ arụmọrụ CentOS na-abịa na EOL (Njedebe nke ndu) Ka ọ na-erule ngwụcha afọ 2021 nke afọ a nke hapụrụ ọtụtụ n'agba ha daa. Rocky Linux bụ onye ndu ndị na-asọ mpi n'etiti ụfọdụ ụzọ ndị ọzọ mana enyere akụkọ ihe mere eme nke otu onye okike n'azụ CentOS ma ugbu a ọ nọ n'azụ Rocky Linux, ọ bụ ọnụọgụ mbụ na-aga na obodo niile. Rocky Linux ewepụtala koodu ntọhapụ kwụsiri ike nke izizi aha ya (Green Obsidian), nke dị iji wụnye na iji na-ekwe nkwa na ọ ga-abụ ihe niile CentOS bụ ma mma.
Na njedebe nke ntuziaka a, ị ga-ama esi edozi Nkume Linux 8.4 sistemụ nrụọrụ.
2 GB Ram ma ọ bụ karịa
20GB diski ike ma ọ bụ karịa
2 CPU / vCPU (processor 1.1 GHz)
Njikọ ịntanetị (nhọrọ)
Mgbasa ozi nwere ike ime (USB/DVD)
Nzọụkwụ mbụ bụ ibudata Rocky Linux, nke enwere ike ịhụ na ha download page.
Ọtụtụ sistemụ ga-eji ya (x86_64) ije na ga-eji (Opekempe) or (DVD). Ozugbo ebudatara faịlụ ISO, gbaa ya ọkụ na USB ma ọ bụ DVD iji mee ka mgbasa ozi bootable. Ọ bụrụ na ị na-eji ngwanrọ VM, ịkwesighi ịwụnye ya ozugbo na onyonyo a.
Dịka n'elu, ntuziaka ahụ metụrụ na nbudata na ịmepụta ma ọ bụ USB ma ọ bụ DVD; Otú ọ dị, ị ga-akasị họrọ iji a bootable USB maka mfe. N'okpuru ebe a bụ ntụziaka nzọụkwụ site na iji ngwá ọrụ okike na-ewu ewu Rufus:
Mbụ, budata ngwa Rufus site na nbudata ụdị kachasị ọhụrụ. Ugbu a, ụdị 3.14 bụ nke kachasị ọhụrụ.
Mepee mmemme, họrọ USB gị n'ime (ngwaọrụ), nke a ga-achọpụta ma họrọ ma ọ bụrụ na ọ banyela. Nzọụkwụ ọzọ bụ ịhọrọ foto .iso na (boot selection), ụdị Rocky Linux ị na-ebudata. Ntọala ndabara kwesịrị ịdị mma. Pịa mmalite ka ịmalite ịmepụta diski buut.
Ị ga-enweta ịdọ aka ná ntị dị ka ọ dị n'okpuru. Jiri nhọrọ akwadoro maka nsonaazụ kacha mma:
Usoro dabere na ngwaọrụ ọsọ USB gị, ga-ewe 1 ruo 5 nkeji. Ozugbo emechara, ị ga-ahụ nsonaazụ (dị njikere) na ala nke Rufus mepụta mmemme USB bootable.
Ugbu a ị bịarutere akụkụ nke ịwụnye Rocky Linux n'ezie. N'ozuzu ya bụ usoro kwụ ọtọ yana otu usoro dị ka CentOS na Fedora. Nke mbụ, mepee onyonyo a na ngwanrọ VM gị ma ọ bụ jiri diski bootable ma ọ bụ ngwaọrụ USB malitegharịa igwe anụ ahụ gị ka ị nweta ihuenyo na-esonụ:
họrọ (Wụnye Rocky Linux) wee pịa tinye ka ịga n'ihu na nrụnye.
Na ihuenyo ọzọ, ịkwesịrị ịhọrọ asụsụ maka nrụnye na sistemụ arụmọrụ. Pịgharịa gaa na ala ka ịgbanwee ntọala ndabara. Ozugbo emechara, pịa ya (Gaa n'ihu) bọtịnụ ga n'ihu.
Mara, nke a ga-agbanwekwa ntọala ahụigodo gị maka mpaghara ahọpụtara.
Ị bịarutere ugbu a na ihuenyo nchịkọta nwụnye. Nke a bụ akụkụ dị mkpa nke nrụnye dịka ịchọrọ ịtọ ntọala nhazi ụfọdụ. Onye ndu ga-agafe ọtụtụ n'ime ha. Agbanyeghị, enwere ike ịwụpụ ụfọdụ ma ọ bụrụ na ịtọlite ​​​​asụsụ na mpaghara ziri ezi dịka usoro nke gara aga.
Ebe ndị bụ isi ị kwesịrị ịma maka ịhazi bụ ndị a:
Ntọala onye ọrụ
Ọ bụrụ na ị naghị enwe mmasị na nhọrọ akpaka, pịa na (Ahụigodo) nhọrọ iji hazie ahụigodo.
Na-esote, ị nwere ike ịgbanwe mpaghara site na ịhọrọ (+) wee tinye asụsụ ndị ọzọ.
Wepu ma ọ bụ dobe asụsụ ahụigodo izizi, ma ị nwere ike nwalee kiiboodu na mpio dee ihe nlere anya ozugbo ị nwere obi ụtọ ịkụ. (Emechara) ịlaghachi na ihuenyo mbụ.
Ntọala ndabara kwesịrị ịdị mma, mana nke a bụ mgbe ịchọrọ ịgbanwe asụsụ OS mgbe echichichara. Họrọ asụsụ OS, pịa (Nkwado asụsụ).
Gbanwee asụsụ dịka ọmụmaatụ n'okpuru wee pịa (Emechara) ozugbo zuru ezu.
Site na ndabara, atọrọ ntọala mpaghara ka (America/New York), nke ị ga-achọ ka o yikarịrị ka ị gbanwee. Nke mbụ, họrọ nhọrọ iji gaa n'ihu na ihuenyo nhazi.
Ị ga-ahụ map ebe ọnọdụ na ihuenyo na-esote. Pịa na maapụ dị nso na mpaghara gị, obodo ka ịhọrọ ma kọwaa mpaghara mpaghara gị. Ị nwekwara ike ịgbanwe elekere elekere 24 ka ọ bụrụ elekere elekere iri na abụọ dịka ọmụmaatụ n'okpuru:
Dịka ị na-ahụ, ihe atụ agbanweela ka ọ bụrụ elekere elekere iri na abụọ wee họrọ mpaghara Oge Ọdịda Anyanwụ Ọstrelia kama ịhọrọ nke ndabara. Ozugbo emechara, pịa (Emechara) aga n'ihu.
Ugbu a ị dechara ma mezie nhazi mpaghara, ị nwere ike ịgbanwe ma hazie ya (SOFTWARE) nhọrọ. Ngalaba a na-emebi (isi iyi ntinye) yana nhọrọ ndị na-abata na isi mmalite nwụnye.
Ntọala ndabara kwesịrị ịdị mma maka 99% nke nrụnye niile ọ gwụla ma ị nwere ihe ụfọdụ achọrọ agbanweghị ihe ọ bụla ebe a. Pịa (Emechara) ịga n'ihu na nhazi nhazi usoro a.
N'okpuru ngalaba software, ị nwere ike imeghe ma gbanwee (Nhọrọ ngwanrọ).
Site na ndabara, ntọala dị n'aka ekpe kwesịrị ịdị mma n'ihi na enwere nhọrọ ole na ole, na sava Linux Rocky ekwesịghị imezi ya. N'akụkụ aka nri bụ ndepụta nke ngwa ngwanrọ agbakwunyere ị nwere ike ịwụnye, nke nwere ike ịbara ụfọdụ ndị ọrụ aka. Họrọ nhọrọ gị wee kụọ (Emechara) aga n'ihu.
Ebe nwụnye bụ ebe ị nwere ike gbanwee akụkụ draịvụ ike gị ka ọ dabara na ihe ị chọrọ. Site na ndabara, a ga-emere gị nhọrọ mgbe ị banyere nkebi nkewa akpaaka.
Nkewa akpaaka na-ekewa draịvụ ike gị na-akpaghị aka na-achọghị enyemaka gị, na-eme ka nke a bụrụ nke na-abaghị uru maka ọtụtụ nhazi onye ọrụ maka ndị ọrụ novice.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịhazi nkewa akwụkwọ ntuziaka, họrọ nhọrọ (Custom) na diski ahụ n'ezie, nke a ga-emerịrị ka ọ pụta ìhè ma ọ bụ tinye akara na foto dị n'okpuru, wee kụọ ya. (Emechara).
Ozugbo ị kụrụ mere, na-esonụ window ga-ewetara gị ka (nkewa akwụkwọ ntuziaka) n'okpuru. Ị ga-emepụta ebe mgbago ndị a:
Na-esote, mepụta nkebi mbụ dị ka / buut nke nha 2 GB.
Dịka ị na-ahụ, ị ​​nwere ebe mgbago mbụ gị na Boot. Ugbu a, ị ga-achọ ịgbakwunye mgbanaka ọzọ. A ga-ekpuchi ihe ndị bụ isi na ntuziaka ahụ, ma ị nwere ike ịmepụta ọtụtụ nhọrọ dị iche iche na nkebi dịka ịchọrọ.
Ugbu a kwugharịa ma mepụta folda mgbọrọgwụ (/).
N'ikpeazụ, mee otu ihe ahụ maka (gbanwee) nkewa.
Ozugbo ịmechara akụkụ akwụkwọ ntuziaka gị niile, ihe atụ dị n'okpuru na-egosi otú tebụl nkebi si ele mgbe ịmepụtara ha. Ka ịchekwaa mgbanwe ndị a, pịa (Emechara) aga n'ihu.
Mgbe ị pịrị (Emere), dị ka nzọụkwụ n'elu kwuru, ị ga-ahụ ozugbo mmapụta na-akpali gị inyocha mgbanwe. Nke a bụ naanị nlele mgbakwunye ngwa ngwa iji jide n'aka na i mebeghị mmejọ ọ bụla, pịa bọtịnụ (Nabata mgbanwe) ka ịga n'ihu na-ekepụta akụkụ maka nrụnye Linux Rocky gị.
Nkebi na-esonụ, nke dị nnọọ mkpa ka ịtọlite ​​​​na nyochaa, bụ (Network na Aha nnabata) nhazi.
Na nzọụkwụ mbụ, ị ga-ahụ nkwụnye netwọk n'elu aka nri, nke na ntuziaka anyị bụ ihe nkwụnye ethernet (ens33). Gbanwee nhọrọ a ka sistemụ arụmọrụ Linux Rocky gị jiri usoro DHCP nye adreesị IP. N'ikpeazụ, tinye aha nnabata nke ịhọrọ wee pịa (Tinye).
Ozugbo zuru ezu, pịa (Emechara) ịchekwaa mgbanwe ndị a.
Na ihuenyo nchịkọta nwụnye bụ nhazi (okwuntughe mgbọrọgwụ). Tinye ihuenyo dị ka ndị a:
A na-adụ ọdụ ka ịtọọ paswọọdụ siri ike n'ihi na nke a ga-abụ paswọọdụ mgbọrọgwụ. Ọ kwesịrị ịnwe ọtụtụ mkpụrụedemede, ọnụọgụ, isi na akara. Ọzọkwa, dee okwuntughe a n'enweghị nsogbu, ebe ọ bụ na ịtọgharịa mgbọrọgwụ okwuntughe bụ ọrụ na-egbu mgbu.
N'ikpeazụ, ị ga-achọ ịmepụta onye ọrụ ọhụrụ site na ịpị (Okike onye ọrụ) nhọrọ.
Pịnye aha njirimara na paswọọdụ ka ịga n'ihu. Otú ọ dị, ị ga-ahụ ihe ndị ọzọ site n'ime ka onye ọrụ chọọ paswọọdụ yana ime ka onye ọrụ bụrụ onye nchịkwa. A naghị atụ aro ka ịme ma ọ bụrụ na ọtụtụ ndị na-eji ihe nkesa na-eme ihe na gburugburu ebe a na-emepụta ma ọ bụ nwere data dị oke mmetụta, mana enwere ike ịhọrọ nhọrọ.
Pịa (Emechara) aga n'ihu.
Emechaala usoro niile dị mkpa ugbu a, ọ nwere ike bụrụ na ọ na-agwụ ike, mana ugbu a ị nwere ike ịmalite nrụnye nke sistemụ arụmọrụ Linux Rocky gị. Iji malite, pịa (Malite nwụnye).
Dabere na ngwaike, akụrụngwa sistemu na nkọwapụta, nrụnye nwere ike were n'etiti nkeji 5 ruo 10 maka ntinye nkesa yana nkeji 5 ruo 20 maka nrụnye desktọpụ. Ntinye ọ bụla ga-adịgasị iche. Nwụnye ga-amalite dị ka onye ọ bụla ọzọ ga-eme, na-eke partitions wee wụnye niile chọrọ.
A ga-akpali gị ịmalitegharịa usoro ahụ ozugbo echichi mechara. Mara, jide n'aka na ị wepụrụ draịvụ USB bootable gị wee kụọ ya (Sistemụ malitegharịa).
Na reboot, ị ga-ahụ menu GRUB. Họrọ nhọrọ mbụ iji buba n'ime Rocky Linux.
A ga-achọrọ ka ị nabata ya (Ikikere onye ọrụ njedebe) nkwekọrịta. Pịa na ngalaba Ozi ikike.
Nabata nkwekọrịta ikike wee pịa (Emechara).
Ugbu a iji mechaa nrụnye na nhazi, pịa (Nhazi Nhazi).
Na-esote, ị nwere ike imesị hụ ihuenyo nbanye GUI gosipụtara ogologo oge mgbe ịmechara nhazi ahụ. Pịa akara ngosi onye ọrụ nbanye wee tinye ozi paswọọdụ ị haziri n'oge nrụnye.
Ekele, ị tinyela Rocky Linux 8.4 Green Obsidian nke ọma.
Dị ka a tụlere na mmalite ntuziaka a, Rocky Linux 8.4 bụ otu ihe ahụ dị ka CentOS 8 na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkesa yiri Fedora, nyere ọdịdị ọ dabere na Rhel. Rocky Linux bụ onye bịara ọhụrụ siri ike nwere ntọhapụ izizi ya nke nkesa ọkwa ụlọ ọrụ dịka CentOS enweghị ọnụ ahịa ọ bụla.
N'ozuzu, oge ga-egosi mgbe niile ma ọ bụrụ na ihe gbanwere. Ọ dịghị onye chere ihe mere CentOS ga-eme, mana ọ mere. N'agbanyeghị nke ahụ, ọzọkwa, ọ dịghị nkesa nwere ike ikwu n'enweghị nsogbu ọ bụla na ha agaghị agbanwe agbanwe. N'agbanyeghị nke ahụ, nyere mwepu nke CentOS, ọ bụrụ na Rocky Linux daa, nkesa ndị ọzọ yiri ya ebiliwo, dị ka Alma Linux, yabụ nwee obi ike na nhọrọ ga-adị mgbe niile.
Esi Wụnye 3.10 Python na Ubuntu 20.04